ဂျပန်လို "မိုး" ကို အမျိုးအစားခွဲထားတာ ၄၀၀ကျော်တောင်ရှိတယ် ! ? - JAPO Japanese News
ကြာ 22 Oct 2020, 9:13 မနက်
တစ်ခုတည်းကိုမှ အမျိုးမျိုးသော စကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြီး ဝေဝါးစေတဲ့ များပြားလှတဲ့ ဂျပန်ဘာသာ။
ဒါဟာ သေချာပေါက် ဂျပန်စာသင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အတော်လေးကို စိတ်သောကရောက်စေတဲ့အရာပါ။ စိတ်ဝေဝါးစေမယ့် ဖော်ပြချက်၊ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကနေမှ အသံကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ စကားလုံးများနှင့် kanji ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုသတ်မှတ်ပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဂျပန်စာ . . .
အဲဒီစကားလုံးတွေထဲမှ ပြောပြချင်တဲ့ အရာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက “မိုး”။
သူ့မှာ သီအိုရီတစ်ခုအရ အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်တောင် အဲလောက်အများကြီးကို မသိကြပါဘူး။
အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀၀ ကျော်အားလုံးကို ပြောပြလို့မရပေမယ့် နာမည်ကြီး လူသိများတဲ့ စကားလုံးအချို့ကို စာရင်းပြုစုပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့ သင်ရော ဘယ်နှစ်ခု သိလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ရာသီအလိုက်မိုးရွာတာကို ခေါ်ပုံခေါ်နည်း . . .
ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ နွေ ဦး ရာသီ၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ ဆိုပြီး ရာသီ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ရာသီတစ်ခုစီမှာ ရွာတဲ့ မိုးနာမည်တွေလည်းရှိပါတယ်။
春 (Haru) နွေ ဦး
春雨 (Harusame) နွေဦးမိုး
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှမတ်လအထိရွာတဲ့မိုး။အဲဒီမိုးက ကြီးမားတဲ့မိုးမဟုတ်ဘဲ ပါးလွှာသောပုံစံမျိုးနဲ့ ရွာတဲ့မိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲလေးပေါ့။
ဒီလိုပါးလွှာတဲ့ပုံရိပ်နှင့်အတူပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် Harusame ဆိုတဲ့အစားအစာ ကလည်း ဒီကနေပြီးမှတစ်ဆင့် အမည်တပ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ Harusame ဆိုတဲ့ပုံရိပ်က မိုးရွာတာထက် အစားအစာဆိုတဲ့ ပုံရိပ်က ပိုပြီးအားကောင်းလို့နေပါတယ်။
လှပတဲ့ မက်မန်းပန်း နှင့် ချယ်ရီပန်းတို့ ပွင့်တဲ့ ရာသီ။ထိုသို့သောအနီရောင်ပန်းများကြား မိုးရွာစေပြီးပန်းများကိုကြွေလွင့်စေတဲ့ ပုံရိပ်ဖြင့် လှပတဲ့စကားလုံးသီကြူးထားတာပါ။
菜種梅雨 ( Natanezuyu)
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့ ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ ၃လ၊၄လပိုင်းလောက်မှာရွာတဲ့ မိုး ကို ပြောတာပါ။
ဒီမိုးက အကျော်ကြားဆုံး မိုးအမျိုးအစားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ဇွန်လတစ်ဝိုက်မှာ မိုးရာသီလို့ပြောရလောက်အောင် အဆက်မပြတ်မိုးရွာပြီး အဲဒီရာသီမှာတော့ မက်မန်းသီးများမှည့်လာတဲ့ အချိန်ကိုက်အနေနဲ့
မက်မန်းမိုး ဆိုတဲ့ မူလအစကနေပြီး မက်မန်းသီးများမှည့်လာတဲ့ အချိန်မှာရွာတဲ့မိုးလို့ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။
夏 နွေရာသီ夕立 (Yuudachi)
နွေရာသီညနေခင်းတွင် သည်းထန်စွာရွာတဲ့မိုး။ ကျွန်တော်မိုးကိုမကြိုက်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် နေ့အချိန်မှာမိုးရွာရင် နွေရာသီရဲ့အပူကိုလွင့်ပစ်လိုက်ပြီးနောက် အေးမြတဲ့ညဖြစ်လာတယ်။
秋雨 ဆောင်း ဦး ရာသီမိုး (Akisame)
秋 ဆောင်း ဦး။ ShuU အဖြစ်လည်းဖတ်ကြပါတယ်။ နာမည်ကိုအမှီပြုထားသည့်အတိုင်း ဆောင်းဦးရာသီမှာ ရွာတဲ့မိုး။နွေရာသီရဲ့အပူပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့် ဆောင်းဦးရာသီ ရောက်လာတဲ့အခါအေးလာပါတယ်။အေးလာတဲ့ အချိန်မှာ မိုးရွာလာတဲ့အတွက် အထီးကျန်မှုတွေပါဝင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအတွက်မှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
冷雨 (Reiu) လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာအရ ၀.၅ မီလီမီတာ (သို့) ဒီထက်နည်းသောမိုးကို မြူမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။
သင်ထီးကိုကိုင်ထားရင်တောင် မှိုတက်လာသလိုမျိုး မြူမိုးများကို တော့ ခံစားရမှာပါ။ .. ..
冬 ဆောင်းရာသီ 時雨 (Shigure)
ဆောင်း ဦးအပြီးမှဆောင်းရာသီအစသို့ရောက်သွားသည့်မိုး။မိုးရွာပြီးရပ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးအားမကောင်းဘူး။ မိုးရွာတယ်တယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ အတည်ပြုလို့မရတဲ့မိုးပေါ့။
氷雨 ရေခဲပြင်မိုး (Hisame)
နှင်းကျတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မိုးကတော်တော်အေးတယ်။ဆီးနှင်းတွေဆိုတာထက် အေးတဲ့အရသာကိုခံစားရတဲ့ မိုး ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသော မိုးရွာလိုက်တဲ့ပုံပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသောအခြားမိုးအမည်များလည်းရှိပါတယ်။
ပမာဏသေးငယ်တဲ့ မိုးရွာအခါမှာ 小雨 (Kosame) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
နေသာပေမယ့်မိုးရွာနေတယ်။ ၎င်းကို “ မြေခွေးရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာ” လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသော်လည်း အချိန်တိုအတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ မိုးသည်းထန်စွာရွာတဲ့ မိုးကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သည်းထန်စွာရွာသွန်းတဲ့ပြောက်ကျားမိုးလို့ ခေါ်တာများတဲ့ပုံပါပဲ။
ခဏလေးရွာသွားပြီး တစ်နေရာရာသို့ထွက်သွားသလိုရွာတဲ့မိုး။ မိုးပြေးလေးပေါ့။
အကယ်၍ သင်က anime နှင့်ဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက 村雨 (Murasame)
ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဓားအမည်ကိုသိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုးက အားပြင်းလိုက်၊ အားလျော့လိုက်နဲ့ ရွာတဲ့မိုးကို ဆိုလိုတာပါ။အဓိကအားဖြင့် အတော်လေးကျော်ကြားတဲ့ မိုးရွာတာကို ခေါ်တဲ့ နာမည်တော်တော်များများကို ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ၊
သူတို့ထဲကအများစုဟာ ဒီနေ့ခေတ်အထိ လူသုံးများနေကြဆဲပါပဲ။
အဲ့ဒီလို စကားလုံးတွေကို အကုန်နားလည်ပြီး ပြောဖို့ခက်ပေမယ့် ဂျပန်ဆန်ပြီးလှပတဲ့ဂျပန်စကားကို ဖော်ကြူးပေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။စကားလုံးများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ပုံရိပ်၊ အာရုံ၊ အသံတို့ဖြင့် မှတ်မိစေတာကလည်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပုံပဲနော်။
နေပူပူ မိုးရွာရွာ သက်တောင့်သက်တာရှိတဲ့ ထီးလေးဆောင်းပြီး အပြင်ထွက်ကြစို့ !
လယ်သမားဘ၀ကနေ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာရောက်လာတဲ့ လက် ၆ ချောင်းနဲ့ ဆာမူရိုင်းက !!?
မော်ရေးရှပ်စ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ သောင်တင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကုန်သင်္ဘော၏ နောက်ဆုံးရသတင်း !!!!!